yakanakisa iphone 6s / 6s plus kesi (2016 edition)
Kuru Nhau & Ongororo Akanakisa iPhone 6s / 6s Plus makesi (2016 edition)
Akanakisa iPhone 6s / 6s Plus makesi (2016 edition)
Kana iwe & apos; usati wambopwanya skrini pa iPhone yako kana neimwe nzira kuikanda muchimbuzi kana puddle mumugwagwa, iwe & apos; mhando yerombo maererano nezvidzidzo. Sezviri pachena, vazhinji vedu tinosungirwa, nekukurumidza kana kuti gare gare, kuchema kurasikirwa kwedu kwekiriniki yekubata, kana iyo foni zvachose.
Isu pachedu, isu & maapos; hatisi ivo vateveri vakakura vekurova chidimbu chepurasitiki rakaomarara pamusoro pedu mafoni, tichivanza runako rwavo, asi isu zvakare tinoziva kudiwa kwekuita patinosvika nyaya iyi. Kunyangwe iwe uchichenjerera zvakadii, mikana irikurwisa, uye zuva rega rega idzva ingangoitika njodzi inomirira kuitika. Kubva pane zvemberi nicks uye scuffs, kuburikidza neakakomba madhi, nzira yese kusvika kuzere yakazara, pane zvinoverengeka zvikonzero zvakanaka zvekungoruma bara uye kubvumidza foni yako & apos; kushama kushama.
Ehezve, kana iwe wakachengetera kunze zvakanyanya sezvawakaita kune iyo iPhone 6s kana iPhone 6s Plus, haufanirwe & apos; t ingobata yakachipa kesi iri kunze uko, uye panzvimbo pezvo isa mari inokwana $ 20- $ 30 kuwana chimwe chinhu.zvakanaka chaizvo. Isu takatsvaga padandemutande kune iwo chete marudzi emakesi, asi isu hatina & gumira & hatigone kutsvaga kwedu pasi kune zvingangodhura sarudzo.
Hezvino & apos; izvo zvataida:
Mutengo renji: $ 24- $ 189 Tenga: iPhone 6s : iPhone 6s Uyezve
Akavezwa makesi e iPhone 6s / 6s Plus
Zviitiko zvinoverengeka zvakasarudzika
Kuwana nyore kune ese madoko
Metallic bhatani ngowani
Inogona kunge inodhura kwazvo
Wood inoda kutarisirwa, kusiyana nema synthetics
Yakavakirwa kunze kweElkhart, Indiana, Yakavezwa ndeimwe yemakambani madiki madiki ausingagone kubatsira uye neimwe nzira kuenderana nawo. Uye hazvisi nekuda kwekuti vane imbwa pachikwata chavo, asi zvakanyanya kukosha - ivo vanogadzira zvinouraya zvigadzirwa.
Yakagadzirwa nemhando dzese dzematanda, Akavezwa makesi anotangira pane zvisingawanzo pasi kusvika pakasiyana zvachose. Yakatemerwa edition 1 kunze kwe1 mhando yakasarudzika. Izvo & apos; s nekuti, kumagumo epamusoro, ayo Rarama Edge mutsetse inoratidzira makesi akagadzirwa kubva pfundo, burl, kana chidimbu chehuni. Izvi zvinosarudzwa zvakanangana nemaitiro avo anokatyamadza, uye zvobva zvasimbiswa nekurapwa mumhando dzese dzekunzwisisa-kana-iyo & apos; s-huni tsika. Imwe neimwe yeiyi yakasarudzika, zvichireva kuti haugone & kungosvetukira paCarved & apos; s webhusaiti izvozvi uye wotenga mashanu akafanana neavo. Muchokwadi, dzimwe nguva unogona & apos; kutenga kunyange imwe-iwe unofanirwa kumirira imwe nyowani, yakasarudzika kesi kuti igadzirwe.
Yakavezwa & apos; s chigadzirwa tambo inowedzera kupfuura Live Edge makesi, hongu, kusanganisira mamwe makuru mhinduro, pamwe nezvimwe zvimwe zvakasarudzika zvigadzirwa. Muenzaniso wakanaka ndeye Old Ironsides muunganidzwa , ine huwandu hwakawanda hwenyaya dzakagadzirwa kubva pakucherwa, zana ramakore rechi18 oak matanda akashandiswa muCharlestown Navy Yard.
Mutengo renji: $ 24.99- $ 79.99 Tenga: iPhone 6s: iPhone 6s Uyezve
Native Union kesi ye iPhone 6s / 6s Uyezve
Mhosva dzakagadzirwa nesarudzo yezvinhu
Unilitarian CLIC 360 mutsetse uri maviri makobvu uye compact
Mitengo muzasi yepamusoro-magumo
Matanda akanaka darn anotonhorera pane smartphone, asi ko marble? Uye zvirinani, zvakadiigirinhi, marble chaiwo? Kana izvi zvichinzwika sezvakanaka mumusoro mako sezvazvinoita mune yedu, saka Native Union yakufukidza neCICIC Marble Green yeiyo iPhone 6s uye iyo CLIC Marble (chena kana nhema) yeiyo iPhone 6s uye 6s Plus.
Izvo hazvisi izvo chete zvinotonhorera maererano nezvinhu zvinoshandiswa, asi ivo & apos; zvakare zvakasarudzika zvisingaenzanisike, nemutsetse wemarble wegirini uchiganhurirwa kumayuniti e999, nepo machena machena muunganidzwa achisiyana maererano neiyo vhenji. Mune mamwe mazwi, iwe & apos; munogara muchiwana chimwe chinhu chisina munhu, pamutengo wechokwadi: $ 79.99.
Native Union ine zvimwe, zvakachipa, asi mimwe mitsara yekushandisa inowanikwa. Iyo CLIC 360 muenzaniso wakanaka: kudonhedza-humbowo (MIL-STD-810 yakasimbiswa), asi compact, ine yakasimudzwa bevel kuchengetedza kuratidza kwako, uye inogadzirwa nerabha uye wakisi yeBritish Millerain machira-akaomesesa-akapfeka uye kunyange mvura- nemishonga. Pa $ 39.99, iyo & maapos; zvakare anodhura zvakanyanya!
Mutengo: $ 40 mukati Tenga: iPhone 6s : iPhone 6s Uyezve
Shandura kesi dze iPhone 6s / 6s Plus
Tsika mifananidzo iripo
Zvimwe zvigadzirwa zvemusana zvine mutengo
Izvo hazvifanire kushamisika kuti yedu inotevera yekupinda-iPhone 6s uye 6s Plus makesi kubva kuCasetify-iri imwezve kuyedza kukukurudzira iwe kuti uwane chimwe chakasarudzika. Mushure mezvose, semafoni anozivikanwa kwazvo pasi pano, iyo iPhone 6s uye 6s Plus (pamwe chete nemapatya avo kubva muna 2014) ari kwese kwese. Iwe unoda kuti chako chionekwe.
Casetify inokunda pane izvi chete. Kwete chete iwe yaunogona kuhodha kesi ine yechinyakare mufananidzo, asi iwo anowanikwa zviri nyore pane iyo kambani & apos; s webhusaiti zvakare anogona kuchinjika, uye saka iwe unogona kutora imwe imwe ye $ 15 pamusoro pe $ 40 yeiyo yekutanga kesi pachayo. Mifananidzo yakadhindwa haingosiyana chete, asi iwo makesi pachawo anosiyana muchimiro chaicho, nematanho matatu (ese akatemerwa zvakafanana) achiwanikwa zvichienderana nekuravira kwako.
Asi izvo & apos; hazvisi zvese, zveCasetify kesi zvakare inodonhedza-humbowo kubva kumakona ese kubva kumusoro kusvika kumamita mana, kumberi kunokwidziridzwa kuchengetedza kuratidzwa, mabhatani mabhatani akanyatso fungidzirwa-uye anodzvanya, nguva yese iyo nyaya yacho inowedzera ingori 0.1 mu (2.6 mm) yekudzika kune yako iPhone.
Spigen Mhepo Ganda
Mutengo: $ 19.99 Tenga: iPhone 6s : iPhone 6s Uyezve
Spigen AirSkin ye iPhone 6s / 6s Uyezve
Yakasimudzwa bezel inodzivirira iyo kamera lens
Haizodziviriri yako iPhone kubva zvakakomba madonhwe
Izvo isu zvatinoreva sekuti 'kondomu kesi' mukati imomo ibasa rezviitiko veteran Spigen, uye rine zita rayo pacharo: AirSkin. Uye Spigen iri kuitisa kuvanhu sesu: vanovenga zvakajairika hombe zvine chekuita nenyaya, uye nenyaya yekuti iyo imwe yakanaka iPhone inoramba yakavanda kumashure.
Nekutenda, iyo AirSkin haina kukura, uye haivhiringidze kutaridzika kweiyo iPhone 6s uye 6s Plus. Ingori 0.299 mu (7.6 mm), inowedzera isingaonekwe 0.019 mu (0.5 mm) kunhare, ichiita kuti zvive nyore kukanganwa nezve kuvapo kwayo. Uye nepo Spigen & apos; s AirSkin isingakwanise kuchengetedza yako iPhone kubva kune chero madonhwe akasimba, inoratidzira bezel yakasimudzwa yakananga kune lens yekamera, uye foni ichiri yakachengetedzwa kubva kune scuffs uye matomu kubva kuzvinhu zvezuva nezuva.
Zvakanakisisa pane zvese, kana iwe & apos; usiri kuda kuburitsa toni yemari yenyaya ye smartphone, pa $ 19.99, iyo AirSkin yakanaka kwazvo kana izvo zvataurwa pamusoro zvichishanda kwauri.
Mutengo: € 45.00 (~ $ 50) Tenga: iPhone 6s : iPhone 6s Uyezve
Moshi SenseCover ye iPhone 6s / 6s Uyezve
Nhanho yakanaka yekudzivirira
Inogona kutarisa nguva / zuva uye kutora / kuramba mafoni pasina kuvhura
Mapepa mune chimiro chekuona vhidhiyo
Magnetic clasp inoichengeta yakavharwa kana isiri kushandiswa
Chekupedzisira, kune vechikwama-vorudzi rwemakesi vanoda pakati pedu, Moshi & apos; s SenseCover iri pakati pezvakanakisa isu & apos; zvatakaona, kusanganisa dziviriro, chimiro, uye zvimwe zvekuwedzera kungwara.
Kutanga nekudzivirira uye dhizaini, iyo SenseCover inoratidzira inotyisa-inotora thermoplastic yemukati furemu, iine leatherette inovhara musuwo wepamberi, ichikweretesa nyaya yacho kumwe kupenya. IPhone yako inozodzivirirwawo zvakanaka kunyangwe isinga shandiswe, nekuti musuwo wakakomberedzwa nemagineti pawakavharwa - zvinoshungurudza nevazhinji makesi emakesi. Iyo kesi inogona zvakare kushanduka kuita kumira, ichibvumidza iri nyore vhidhiyo kutarisa kana vhidhiyo musangano paunenge uchienda.
Chekupedzisira, maererano neiyo SenseCover & apos; s smart, inonyatso kubhikira kune inobata-inonzwisisika pamberi pevhavha yakapetwa newindo iro raunogona kutarisa nguva uye zuva, uye kunyangwe ndiani & apos; ari kufona. Kubvisa maaramu kana kuramba mafoni kunoitwa nyore nyore kuburikidza nekubata, saka haufanire kugara uchisunungura uye wozobatirira zvakare iyo kesi-yakanaka kwazvo.
iri 64gb inokwana iphone 11
iphone 11 yakavhurwa dema chishanu madhiri
yakanakisa kamera app yeNexus 5x
Iyo yakanakisa yakachipa iPhone yaunogona kutenga muna 2021
5 epamusoro e-mail maapplication kutsiva stock yako Android kana iOS e-mail app ne
Maitiro Ekuverenga Mafaira muJava
Verizon inoburitsa hukuru hukuru hwe Samsung Gear S3 classic uye muganho
Moto G5 Plus Ongororo